Setha isikulufa: kuyini kanye nezicelo | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Kuningi izinhlobo zesikulufa emakethe, ezinye zithandwa kakhulu kanti ezinye zikhetheke ngokukhethekile ngezinhlelo ezithile ezithile. Olunye lwalezo zinhlobo okubizwa ngokuthi yi-set screw, esizonikezela kulo lesi sihloko ukuchaza konke odinga ukukwazi mayelana nalokhu kuhlukahluka nokuthi kungakusiza kanjani nge Amaphrojekthi we-DIY.
El setha isikulufa Luhlobo lwangempela lwesikulufa esisetshenziswa kwezinye izinhlelo zokusebenza ozibonile ngokuqinisekile kwesinye isikhathi. Isibonelo, into yokuqala efika engqondweni manje yizibani noma amalambu emigwaqo, lapho evame ukusetshenziselwa ukubamba izingxenye ezithile zala malambu lapho ahlukaniswa ...
Ukuhlukanisa phakathi kwe-bolt ne-screw akuyona into elula kwabaningi. Umehluko phakathi kwalezi zinto ezimbili ungadideka, kepha umehluko omkhulu ulele ngentambo nosayizi. Amabhawodi avame ukuba makhulu futhi angabi nesiphetho esikhombe. Izikulufo zincane futhi zikhonjisiwe.
1 Siyini isikulufa esisethiwe?
2 Izinhlobo zezikulufu
2.1 Ngokusho kwekhanda
2.2 Ngokusho kwento eyisikulufu
2.3 Ngokusho kokuqeda
2.4 Ngokusho komsebenzi
Siyini isikulufa esisethiwe?
Un setha isikulufa Ngokuyinhloko iyisilinda sensimbi noma induku efakwe intambo eqoshwe kuyo yonke ubude bayo. Lokho wukuthi, ayinakhanda njengakwezinye izikulufu. Umehluko kuphela phakathi kwemikhawulo yawo ukuthi enye yazo ibizwa ngokuthi yimpande futhi izofakwa emgodini ocijile kanti omunye umkhawulo uvamise ukuba nomgodi oqoshwe ukulingana isikulidriver (futhi kungaba ukhiye ka-Allen) ukugoqa noma ukuskrulula .
Ukuba wusizo kwalolu hlobo lwesikulufa kuvamise ukuthi ukulungiswa kwengxenye nokuma wezinto ezithile ezingaguquki ezintweni ezisuswayo. Isibonelo, cabanga ngengxenye yeshubhu engena kwenye ishubhu. Ishubhu langaphandle linemigodi efakiwe lapho lezi zikulufo zingafakwa khona ukuze kube nengcindezi ezungeze ithubhu langaphakathi, ngaleyo ndlela liyibambe.
Umehluko phakathi kwesikulufa nesethi yendabuko ihlala ikakhulukazi ku-physiognomy yayo nasemandleni ebhekiswe kuwo. Ngokwesiko lendabuko, ubonile ukuthi uthinta ngokuqhubekayo, kepha ikhanda (ikakhulukazi uma lenziwe ngethusi, i-aluminium noma enye ingxube ethambile, futhi ikakhulukazi lapho kusetshenziswa ezinye izivivinyo ngaphandle kolawulo) kungonakala ngenxa yamandla . Lokho kwenza kungabi lula ukuyihoxisa noma ukuqhubeka ukuyicindezela ...
Esikulilini esisethiwe, ingxenye umnyango ofakwa kuyo ihlanganiswe ngokuphelele nesikulufu uqobo, ngaphandle kwekhanda. Ngakho-ke, kuphela kuphela ngaphansi kokudonswa. Ngaphezu kwalokho, zivame ukwenziwa ngensimbi ukumelana okukhulu.
Kuneziningana izinhlobo zezikulufu ngale kwesethi isikulufa, futhi ingahlukaniswa ngokuya ngezici ezahlukahlukene ...
Ngokusho ukuma kwekhanda kwesikulufa kukhona:
I-hexagonal: Kujwayelekile futhi kuvame ukusetshenziselwa ukubopha noma ukufaka izingxenye zengcindezi. Ngokuvamile banenathi. Futhi akuzona zonke ezingaqiniswa kusetshenziswa isokhethi noma ukusonta, ezinye zifaka nokubamba kwe-screwdriver. Isibonelo, isikulufa se-hex flange imvamisa sinekhanda lezinkanyezi, futhi inzuzo yalo enkulu ukuthi ayidingi i-washer.
Ikhanda elihlukanisiwe: zivame kakhulu, lezo ezivumela ukusetshenziswa kwe-screwdriver. Kukhona zona ezinendawo eyisicaba, yesiphambano, njll. Zilungele lapho ukuqina okuningi kungadingeki, njengezakhi zokhuni. Kunoma ikuphi, ikhanda lihlala ngaphandle, noma ngabe i-countersink yenziwa ingafihlwa.
Inhloko eyisikwele: azivamile njengangaphambili. Zisetshenziswa ezimweni lapho kudingeka ukuqina okukhulu okufana nokwe-hexagonal. Isibonelo, ngokulungisa amathuluzi wokusika noma izingxenye ezihambayo zeminye imishini.
Ikhanda eliyindilinga noma eliyindilinga: Imvamisa baneheksagoni ngaphakathi ukufaka ukhiye we-Allen noma olunye uhlobo. Zisetshenziswa emalungeni adinga ukuqiniswa okuphezulu ngokuqina. Ngithatha leli thuba ukuchaza izinhlobo zamakhanda:
Flat- Banesikhala esisodwa kuphela emakhanda abo salolu hlobo lwe-screwdriver eyisicaba.
Inkanyezi noma ukuwela: yilolu hlobo okuthiwa yiPhillips.
I-Pozidriv (Pz): ifana kakhulu neyangaphambilini, kepha inesiphambano esijulile nolunye uphawu olukha phezulu olunikeza ukuvela kwenkanyezi.
I-Torx- Lokhu akuvamile, kepha kungasetshenziswa kwezinye izinhlelo zokusebenza zezinkuni, njll. Ikhanda lalo linekhefu elingafani nezinkanyezi.
abanye: kukhona ezinye ezifana nengilazi noma indebe, iRobertson, iTri-Wing, iTorq-Setm, iSpanner, njll.
Uvemvane: njengoba igama layo liphakamisa ukuthi linohlobo lwamantongomane "olunamaphiko" olumiswe njengovemvane ukuze lukwazi ukuqinisa ngezandla zakho. Ezimweni lapho i-torque eningi ingadingeki futhi edinga ukukhishwa nokususwa kaningi.
Ngokusho kwento eyisikulufu
Ngakolunye uhlangothi, uma ngabe isikulufa impahla Sinakho:
Ye-aluminium: ayimelani kakhulu nemizamo, kepha imelana nezimo zezulu nokukhanya. Ilungele ipulasitiki nezinkuni.
I-Duralumin: zenziwe nge-aluminium zihlanganiswe nezinye izinsimbi ezifana ne-chromium. Zandisa ukuqina kwayo.
Acero: imvamisa iyinsimbi engagqwali, futhi inamandla kakhulu.
Ipulasitiki- Lokhu akuvamile, kodwa kuyatholakala ukumelana kahle kakhulu nomswakama kahle, njengokufaka amapayipi.
Latón: Zinombala osagolide futhi zivame kakhulu ukusetshenziswa ngokhuni. Anamandla, kepha awaqinile njengawensimbi.
Lezi zikulufu nazo zingaba nazo ukuqeda okuhlukile:
I-Cadmium: zinokubukeka kwesiliva, zinokumelana okuhle nezimo ezahlukahlukene futhi uma ihlanganisa i-oxidize ayikhiqizi imikhiqizo yokugqwala.
Lashukumisa: kusetshenziswa okugeza kwe-zinc futhi kubuye kube nokubukeka kwesiliva, noma kunjalo kungabonakala amabala ajwayelekile e-zinc. Iphikisana kahle nezimo zokugqwala.
Ezishisayo: zinombala ophuzi ophakeme. Kutholakala ngokuqedwa okuhlanganisiwe ne-chrome. Lokhu kuqhubeka nokwandisa ukumelana nokugqwala.
I-Nickel yafakwa: Unesiphetho segolide esikhanyayo ngenxa yokuqedwa kwe-nickel. Imvamisa isetshenziselwa ukuqeda ukuhlobisa.
Ithusi lagcotshwa- I-Brass isetshenzisiwe futhi inokubukeka kwensimbi okucwebezelayo kokunye ukuqeda kokuhlobisa nokumelana nokugqwala.
I-Phosphatized: bagezwa nge-phosphoric acid ngokucwiliswa futhi lokho kubanikeza ukubonakala okumnyama okumpunga.
I-Bluing: acwebezele okombala ngombala omnyama ojulile. Bathola i-oxidation elawulwayo yensimbi ekhiqiza leyo ngqimba emnyama ebenza bakwazi ukumelana nokugqwala.
IpendiweEzinye zidwetshiwe ukuze zihlobise kakhudlwana, ngokwesibonelo izikulufu ezimnyama ezisetshenziswa yifenisha ethile yokhuni.
Ngokusho umsebenzi kwezikulufo kungabuye kufakwe ohlwini ku:
Ukuzishaya nokuzishaya- Isetshenziselwa ishidi lensimbi nokhuni oluqinile. Zibukhali futhi ziyakwazi ukusika indlela yazo ngezinto.
Intambo yezinkuni: ngokungafani naleso esedlule, abanayo intambo eqoshwe ebude babo bonke, kepha kunalokho babe nengxenye yesikulufa esingasebenzi. Ziyizikulufa ezijwayelekile zamapulangwe lapho intambo ingu-3/4 kuphela wesikulufa. Futhi banephuzu elibukhali futhi bangazisika ngendlela yabo.
Ngamantongomane: Abanalo iphuzu, futhi basebenzise inadi ukujoyina izingxenye ngengcindezi enkulu. Ingasetshenziswa futhi nge-washer ekhuphukayo, ngaleyo ndlela iqinise ukuhlala kwamantongomane namakhanda.
Setha isikulufa noma izikopelo: (okuchazwe ngenhla)
Akungeneki: Luhlobo lwesikulufa sezinhlelo zokusebenza zezokuphepha ezifakwe ngaphakathi futhi akunakwenzeka ukususwa. Ungaphoqa kuphela ingxenye ukuthi iphule. Zisetshenziswa ezingxenyeni ezivezwe umphakathi, zivimbela ukusetshenziswa kwazo.
abanye: nazo zingalinganiselwa kuzinhlelo zokusebenza ezinemba kakhulu, ukumelana okuphezulu (okumakwe ngama-initials TR ekhanda), njll.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Setha isikulufa: kuyini kanye nezicelo
I-actuator eqondile ye-Arduino: i-mechatronics yamaphrojekthi wakho